Xafiiska Kingsoft, waa hab lagu soo jiito isticmaaleyaasha cusub | Laga soo bilaabo Linux
Horaan kuugu sheegay a dhibaato in aan ku jiray Xafiiska Kingsoft (ama xafiiska wps, sida aad rabto inaad ugu wacdo) inaan si dhib yar ku xaliyay, hadana waxaa la joogaa waqtigii aan ra'yigayga ka dhiiban lahaa qaabkan cusub.
Qaar ka mid ah cabashooyinka macaamiishayda ayaa ah inaysan haysan wax ku dhejisan dhererka xafiiska Microsoft, maaddaama ay tixgelinayaan in is-dhexgalka tusaale ahaan LibreOffice uu yahay mid duugoobay. Xaqiiqdii kuma raacsani maaddaama aan u arko in iskudhafka Ribbon uusan ahayn mid la adeegsan karo marka loo eego adeegsiga maaddaama ay u baahan tahay qasabno badan oo badan iyo qashin bannaan aad u tiro badan oo aan jeclahay.
Marka aan ka tago fikradayda, waa in maskaxda lagu hayaa in macmiilku had iyo jeer sax yahay oo marka la eego macnaha Kingsoft Office wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa qancinta macaamiishayda inay u haajiraan GNU / Linux maaddaama ay ogaadeen in halkan aan ku haysanno waxaad u baahan tahay.
Hadda ka hadlaya iswaafajinta qaababyada Microsoft Office ee lahaanshaha, waa run inay waxyar (xoogaa) ka wanaagsan tahay dhinacan marka loo eego LibreOffice laakiin ma gaarto Iswaafajinta 99% sida dadka qaar sheegtaan.
Waxaan ogaaday tusaale ahaan kiiska caanka ah ee loo yaqaan 'Arial font' inuu xoogaa ka duwan yahay. Waxyaabaha kor ku xusan runtii ma ahan dhibaato weyn; Dhibaatada jirta ayaa ah in mararka qaar, marka dukumiinti lagu qoro Microsoft Office, waxaan leenahay hal bog, ka dib markii aan ka daawaneyno Kingsoft Office waxaan leenahay labo bog tanina waxay u badan tahay tirada pixels ee xafiiska Kingsoft u adeegsado inuu kala saaro hal xariiq iyo mid kale ayaa waxyar ka weyn.
Dhinac ka mid ah sida ay ugu qanacsan tahay arrinta iswaafajinta ayaa ah, tusaale ahaan, ma helno sanduuqyadan cawlan ee badiyaa ka muuqda LibreOffice oo beddelaya "meel" markii aan fureyno faylasha .doc ama .docx.
Dhammaan waxyaalaha xun ee aan kaaga sheego xafiiska Kingsoft waa dabcan waxyaabo aad ugu fiirsato muraayad weyneyso tan iyo markii jaleecada hore macmiilku wuxuu u maleynayaa in wax waliba hagaagsan yihiin waana intaas oo lagu daray. Marka la soo koobo, waxaan u arkaa xafiiska Kingsoft in badan oo ka mid ah habka lagu qanciyo macaamiishayda, in kasta oo Shiinaha dhinac naga tahay, waxaan rajeyneynaa inay gaarto 100% waafaqid 1 sano ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Xafiiska Kingsoft, waa hab lagu soo jiito isticmaaleyaasha cusub
Si aan runta u sheegno, nidaamka Xafiiska Kingsoft aad ayuu u fiican yahay. Maaddaama ay wali ku jirto marxaladda Alpha, way kuu fududahay inaad hesho khaladaad qaar ka mid ah, sida kiiskeyga aan u haysto CV-kayga oo aan markii ugu horreysay ku saxay Google Docs, ka dibna MS Office 2007, iyo ugu dambeyn, markii aan doonayay inaan wax ka beddelo waxaa ku jira Kingsoft Office, waxaan ku tusayaa sida ugu xun ee ugu macquulsan. Marka la soo koobo, waa dhibaato in la xaliyo.
Xitaa sidaas oo ay tahay, qolka xafiiskani wuxuu muujinayaa inuu xoog badan yahay inkasta oo ay ku jirto xilli hore oo ku filan in loo arko degganaan. Sikastaba, waan taageeri doonaa LibreOffice iyo Kingston Office labadaba (kan ugu horeeya ee heerka .odt, iyo tan labaad, qaabka Microsoft Office in dad badani diidan yihiin inay u haajiraan GNU / Linux).
waad saxantahay. Sidaan kuu sheegay, aan sugno 6 ilaa 12 bilood si iswaafajintu u noqoto boqolkiiba boqol. Maaha inaan horey u akhriyay laakiin waxaan ku rajo weynahay in waqtigaas dib u dhaca Shiinaha uu xoogaa ganacsi la samayn doono Microsoft si uu u xalliyo dhibaatada is waafajinta.
Hal shaki ayaa la jaan qaadaya Debian 7 iyo waxa farqi ah ee u dhexeeya xafiiska Kingston, xafiiska libre 4.x iyo apache open office 4.x oo u fiican deegaanka Debian, waxaan u arkaa inay aad isugu egyihiin.
Anigu waxaan la mid ahay fikirka neysonv, waxaan jeclahay LibreOffice waxaanan jeclahay isdhexgalka sifiican. Khasaaraha kaliya ee jira ayaa ah taageerada qaababka OOXML (MS Office 97-2003 taageerada qaabka laba-geesoodka ah waxaan dhihi lahaa waa wax fiican), taas oo kafiican xafiiska WPS, oo waliba laga yaabo inay aad ujecelyihiin dadka aadka uguxiran MS Office iyo is dhexgalka, taas oo aan u maleynayo inay fiicantahay in la helo qolkan xitaa haddii ay gaar tahay. Waxa kaliya ee maqan ayaa ah in lagu tarjumo Isbaanish. Faylasha luuqada ee lagu turjumi karo ayaaba laga heli karaa Github, aan aragno hadii ay jiraan dad la dhiiri galiyay dhawaana waxaan heysanaa xafiiska WPS ee Isbaanishka:
Dhab ahaan, shaqsi ahaan xaqiiqda ah in lagu turjumay afka Isbaanishka wax badan ayey iiga faa'iideysan doontaa. Maalin dhaweyd waxaan ka fiirsanayay arinta turjumaada waxaan turjumay labo wax aan micno lahayn laakiin markaan wax adag haysto waxaan galiyaa mashruuca github
Waxaan ka fikiray inaan caawiyo, xitaa in yar uun, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in tarjumaadda la bilaabay ay ka timid Isbaanishka laga soo jeedo Peru iyo anigana aan ka imid Spain. Runtii uma maleynayo inay jiraan waxyaabo badan oo ku kala duwan marka ay timaado tarjumida barnaamijka, laakiin ma ogi hadii ay fiicnaan laheyd in gacan laga geysto tarjumaadaas horey loo bilaabay ama mid laga soo bilaabo meeshii ugu hooseysay.
By the way, anigoo ka hadlaya isdhexgalka, waxaan kaliya ku rakibay Kingsoft Office ujeedooyin imtixaan (haa, waxaan ku sameeyay Windows, ma aanan dooneynin inaan ku rakibo maktabadaha 32-bit Kubuntu ...), waxaanan ogaaday in interface waxaa loo beddeli karaa qaabka caadiga ah! = D
Dalka Peru, waxaan aad ugu tiirsanahay Xafiiska oo isla marka uu xafiiska Kingsoft soo baxo, waxaan xiiseynay inaan tarjunno.
Xaaladdayda, waxaan mar hore ku isticmaalayaa nooca Alpha 11 kombuyuutarkayga Debian.
Horumarinta Xafiiska Kingsoft waxay horumarinaya qaab dhismeedka 64-bit.
Warku wuxuu ka yimid soosaaraha Chizhong Jin.
Sawirradii ugu horreeyay.
Oh! Whew .. 🙂
Eliotime3000 Waxaan ka helay mid kale oo Shiinuhu ka kooban yahay oo Office ah oo la yiraahdo Yozo Office waa inaadeerkiis xafiiska Kingsoft…. Xafiiska Yozo wuu isku dayay laakiin aniga ima aysan shaqeyn…. http://www.yozooffice.com/
KingSoft Office wuxuu horey u sii daayay nooca Alpha 12 ee loogu talagalay GNU / LINUX.
interface-ka cusubi waa mid aad ugu yar xagga ALPHA 12. Sidee la yaab leh inaad adigu soo gelisay sawir hore ee Xafiiska KingSoft.
Oops shaashadda waxay ka socotaa beta 1 tan iyo markii aan rakibey adoo raacaya casharradan Linux http://community.wps.cn/download/ Waad ku mahadsantahay macluumaadka waxaanan tijaabin doonaa alfa 12 si aan u arko waxa jira inkasta oo alfa ahaan aan ahay waxaan u maleynayaa inay ka xasilloon tahay. habka aan u arko waxay umuuqataa in alfa 12 ay ka weerareyso MO 2010 maya ???
Waxay umuuqataa xafiiska 2013 ee Windows 8. XD nuqul cad
Waxaan sidoo kale u guuriyay Xafiiska 2013.
Sabab sheeg dijo
Waa run, qaar badani ma soo maraan MSOffice. Aad ayaan u aqaanaa inbadan, oo aan kujiro nafteyda (in kastoo aan horeyba ulaqabsaday Libreoffice, hadana waxaan u maleynayaa inay arinta tahay, laqabsashadeeda ... Kama sii mid aha kuwa aaminsan in MSOffice uu ka sareeyo LibreOffice, way kala duwan yihiin uun).
Hadda, ku saabsan waafaqid… .. AAN DHAMMAAN BILAABNO ISTICMAALKA ODT EE DOCX XD XD XD…
Waxaan ka hinaasi lahaa tabta WPSOffice. Taasi waa inay ku jirtaa LibreOffice.
Ku jawaab DarLaRazonencio
Qofna ma garanayaa haddii nooca cusubi uu hagaajiyay qaabeynta farta? Taasi waa khasaaraha kaliya ee aan helay, hadii qoraalka sifiican loo aqrin way igu adagtahay inaan shaqeeyo ... ma ahan inaan la aqrin karin laakiin waa inaysan ku haboonayn hufnaanta LO ama codsiyada kale. (Waxaan isticmaalaa Ubuntu 13.04).
Tijaabinta ... Waxay umuuqataa inay tahay bedel fiican.
Matthias B. dijo
Waa wax lagu kalsoonaan karo in Kingsonft Office uu kafiican yahay iswaafajinta docx-ka marka loo eego LibreOffice, iyadoo LibreOffice ay taageero ka haysato bulsho aad u tiro badan oo shaqeyneysay waqti dheer, xitaa sidaas oo ay tahay ma awoodi doonto inay ka adkaato is waafajinta MS Office
Jawaab ku bixi Matias B
Waxaan isku dayay alifadii ugu horeysay isla sababtaas awgeedna cilado badan ayaa ka jiray, laakiin waxaan tijaabinayaa hada si aan u arko inta ay ka fiicnaadeen 🙂
Waxay umuuqataa in Linux uu noqdo Windows.
Marna xaqiiqda fudud ee ah inuu yahay barnaamij bilaash ah mabda 'ahaan, in qofku go'aansado inuu ku isticmaalo softiweer ruqsadyo aan ahayn GPL ee Mr. Guru Richard waa arrin naftiisa ku saabsan, oo ku habboonaanta iyo dhadhanka, iyo noocyadu way jaban yihiin. Waxaan taageersanahay xafiiska KS maadaama ay ka dhigeyso isbadalka otomaatiga xafiiska mid saaxiibtinimo leh, oo libreoffice-ka uu ilaaway 🙁
Hahaha, is deji, dhib malahan.
Ha ahaato GPL, BSD, Linux, Windows, MacOSX, FreeBSD ... Ilaa iyo inta ay u adeegayso oo ay fulineyso codsiyada iga qosolka badan, waan rakibaa.
Waxaan si fudud ugu baahanahay xafiiska MS ee 2010 wax soosaarka, sidaa darteed waxaan u isticmaalaa khamri, asal ahaan si aan u tafatiro faylasha ku jira qaababka MS. Haddii aan ka bilaabay xoq marka waa la dhihi karaa way fiicnaan laheyd in la isticmaalo libreoffice iyo kingsoft office taas oo aan u arko inay dhiiragalin fiican u tahay dadka isticmaala winbug inay u wareegaan gnu / Linux, xilligan waxaan kaliya rajaynayaa in adduunka ciyaaraha PC wuxuu u haajiraa gnu / linux xafiiska kingsoft wuxuu kujiraa qaab aad u xasilan oo Isbaanish iyo qaamuusyo wata
Looma baahna in la sharaxo sababta qofku u adeegsado Win.
Haddii aad isticmaasho, waad dhammaatay iyo maxaa, waxaan u isticmaalaa iyo kumanaan qof oo kale. Shaki iigama jiro, kuwa dayactira Debian, Gentoo, Slackware, iwm ... Waxay adeegsadaan Win ilaa MacOsx.
Haddii aad rabto inaad isu aragto inaad tahay qof diinta jecel oo farta ku fiiqa, qarxiya kuwa aan u maleynaynin sidaada oo kale ... iyo adiga.
Si daacadnimo ah uma fahmin ujeedka maqaalka, maadaama uusan si buuxda ugu raacsaneyn cinwaanka.
Shiineysyadan ayaan waji lahayn marka ay timaado wax guurinta! cajiib ah !!
Libreoffice waa mid aad u wanaagsan, laakiin runtii waxaan aad u jecelahay xalka xafiiska kingsoft si ka wanaagsan, in kasta oo aan si gaar ah u jeclahay xisaabta libreoffice-ka iyo sawirada codsiyada, oo aanaan ka helin Xafiiska Ms. Way fiicnaan laheyd haddii Kingsoft uu ku daro taageerada qaabka odf
Warqade noocee ah ayaan ku isticmaali karaa xafiiska wps si aan ugu beddelo farta Arial?
Bilihii la soo dhaafey, xafiiska kingsoft horeyba wuu u hagaagey, horeyba wuxuu ula yimid nooca Isbaanishka iyo qaamuuska dib-u-eegista ee Isbaanishka, in kasta oo ay weli u baahan tahay wax yar oo hagaajin ah laakiin wax badan baa soo hagaagtay.
Dhibaatada kaliya ee i haysata ayaa ah maadaama aan ahay arday jaamacadeed, waxaan u baahanahay inaan galo xigashooyinka bibliographic ee APA Standard iyo Microsoft Office ayaa i siinaya ikhtiyaarkaas oo fududeynaya abaabulka ballamahan, oo looga baahan yahay xafiiska Kinsoft, haddii aad ku dari karto , wey fiicnaan laheyd.
Waxaan hadda rakibay WPS Ofifice waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii shirkad ay u adeegsan karto koonto shaqsiyeed sharciga dhexdiisa?